जनताले सोधेका प्रश्नमा पिठ्यूँ फर्काउन मिल्दैन शुक्रवार, जेठ २८, २०७८
दलितमैत्री बजेटका प्राथमिकताहरु सोमवार, जेठ २४, २०७८
कर्णालीमा विकास र रोजगारीमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ शनिवार, जेठ २२, २०७८
यी हुन्, कर्णाली समृद्धिका आधारशिला दयामायाले राजा महेन्द्रको जस्तो देखावटी समावेशीले अब पुग्दैन । देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । यो प्रदेश पनि यसबाट अछुतो छैन । कर्नाली प्रदेश विकसित, समृद्ध र जनता खुशी, सुखी बनाउने सबैको सपना छ । तसर्थ यसका लागि जनताप्रति समर्पित दूरदर्शी, इमान्दार, नैतिकवान नेतृत्व प्रदेशले पर्खिरहेको छ । यदि यस्तो नेतृत्वले प्रदेश हाँक्ने हो भने कर्णालीलाई समृद्धि बनाउने सपना विपनामा परिणत गर्न धेरै समय लाग्दैन । बुधवार, जेठ १९, २०७८
गणतन्त्र, कर्णाली र दलित महिला हजारौ नेपालीको बलिदान र वर्षौसम्मको योगदानले गर्दा आज नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । यसरी दिवस मनाउन पाएका हौँ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ आज दिनमा आइपुग्दा लोकतन्त्र हरण गर्ने प्रयास भएको छ । गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । यसका विरुद्ध विगतमा जसरी एकजुट भएर लाँग्यौ । विविध रुपमा एकजुट भएर लाग्यौँ । त्यसरी आजका दिनमा संयुक्त रुपमा मोर्चाबन्दी भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । आइतवार, जेठ १६, २०७८
महामारीमा बचाउने आमाहरुमा समर्पित आजको विशेष दिन आफ्नी आमासँग व्यतित गर्ने ईच्छा हर कोहिलाई हुन्छ । तर संक्रामक रोग कोभिड १९ ले अहिले भयावह अवस्था श्रृजित भएको छ । दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या मात्र नभईकन मृत्युुदर पनि बढिरहेको अवस्था छ । देशका प्राय जसो सबै क्षेत्रहरुमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ र सबैलाई घर मै बस्न आह्वान गरिएको छ । त्यसैले आज सबैले आफ्नो घरमा बसेर आजको दिन मनाई राखेका छन् । तर त्यो सबैमा राष्ट्र र जनताका लागि अहोरात्र खटिने केही क्षेत्रका मानिसहरु अटाउन सकेनन् । मंगलवार, बैशाख २८, २०७८
लापरवाहीको नतिजा लास पनि हुन सक्छ बरु विस्तारै भइहाल्छनी भन्दै, लापरवाही गर्दा, उपेक्षा गर्दा, यो केही पनि होइन भनेर बिन्दास हुँदा, विज्ञ, चिकित्सक र युएनको सार्वजनिक अपिल र डेटालाई नपत्याँउदा गोर्खे पाराले हामी धेरैलाई दुख दिएको छ, संक्रमित वनाएको छ, मृत्युको मुखै सम्म पुर्याएको छ, आफन्त गुमाउनु परेको छ। आइतवार, बैशाख २६, २०७८
विशेष सम्पादकीय लामो प्रतिबन्धपछि हामी फेरि फर्किएका छौँ । फेरि सपना देख्न थालेका छौँ । कर्णाली प्रदेशका हरेक नागरिकका सपना र बाध्यताका समाचार प्रकाशन गर्ने हाम्रो उद्धेश्य हरहालतमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौ । शनिवार, चैत्र ७, २०७७
कोरोनाबाट यसरी बच्न सकिन्छ सरकारले काठमाडौं निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ । यो निर्णय आम जनताको पक्षमा छ । हामीले बुझ्नुपर्छ कि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको कोरोना संक्रमण घटेर होइन । आम जनतालाई आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक भार परेको कारण निषेधाज्ञा खुकुलो भएको हाृे । बुधवार, भदौ २४, २०७७
अन्तरजातीय विवाह गर्दा अत्याचार ! यो समाजका हरेक वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसलाई एक हौँ भन्ने सोचको विकास गरौँ । त्यसका लागि सहिष्णुतालाई अंगालौं । त्यस पछि न त कोही अजित मिजार बनेर मारिनपर्छ । न त कोही नवराज र अंगिराले झै मृत्ुयुवरण स्वीकार्नुपर्छ । आफुलाई नेपाली हुनुमा गर्व गरौं । नेपाली भेटेपछि सम्मान गरौं । जातको नाममा घमण्ड नगरौँ । जातमा नाममा राजनीति, हिंसा र विभेद झन गर्दै नगरौँ । बिहिवार, जेठ २२, २०७७
वैकल्पिक माध्यमबाट पढाऔँ केही विद्यालय सञ्चालक आफ्नो स्कुल खोल्न आतुर देखिन्छन । सरकार पनि यो मामिलामा कन्फ्युज देखिएको छ । विषयवस्तुको सही मूल्यांकन गर्ने भविष्यद्रष्टा नीति निर्माण तहमा नहुँदा हरेक निर्णय प्रभावित हुन्छन । तर यो भन्दा पहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको नेपाल अवस्थालाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ । यसलाई केही बुँदामा हेर्दा कोरोना महामारीको परिस्थिती अनुकुल छैन् । यद्यपी यो सधै प्रतिकुल भइरहदैन । मंगलवार, जेठ २०, २०७७
कर्णाली चियाउने एउटा फरक ऐना १० बर्ष जनयुद्ध लडेका कर्णालीका मानिसले छुट्टै प्रदेश बनाउन सुर्खेतमा थप रगत बगाउनु परेको थियो । जसरी एउटा सिंगो कर्णाली प्रदेश बनाउन सयौ हजारौले रगत बगाए । त्यसरी नै मान्छेहरुमा अहिले विकासको भोक जागेको छ । आफूले जिताएका नेताहरुमाथि भरोसा छ । तर पूर्ण विश्वास भने छैन । परिवर्तनका लागि बगाएको रगतको बदलामा राहत महसुस भइरहेको छैन । व्यवस्थित र पद्धतिगत संरचनाको समस्या छ । बुधवार, बैशाख ३१, २०७७
ओलीको राष्ट्रवाद कता हरायो ? भारतले बर्षौदेखि सिमाना मिच्दै आएको थियो । हस्तक्षेप गरिरहेकै थियो । त्यसविरुद्ध बोल्ने राजनेताका रुपमा ओली कुनै बेला उदाएका थिए । तर अहिले आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा भएपछि ओलीले मोदीसँग सीमाका विषयमा कुरा गर्ने छैनन् । मिचिएको सिमाना फिर्ता गर्ने छैनन् । किनकी ओलीले भारतसामु घुडा टेकिसके । सोमवार, बैशाख २९, २०७७
अप्ठ्यारोमा अस्थितरताको प्रयास नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई वैचारिक नेतृत्व गरिरहेको छ । तर नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई धेरै कुरा सिकाएको छ – अप्ठ्यारोमा नहड्बडाउने, अनिकालमा मिलेर बीऊ जोगाउने, सहकालमा भएका नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक सम्वाद गर्ने, अनि विविधता बीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने । शुक्रवार, बैशाख १९, २०७७
ओली प्रवृत्तिलाई छिटो बिदा गरौ नेपालमा पनि ओली प्रवृत्तिले मधेसी लगायतका उत्पीडित जातिरसमुदायप्रति चरम घृणा र त्यसको जगमा एकल जातीय अहंकारवाद तथा अन्धराष्ट्रवादको खाँडो जगाएर सत्तामा पुग्ने र अहिले चौतर्फी वितण्डा मच्चाएर देशका सबै लोकतान्त्रिक संस्था ध्वस्त पार्दै र राज्यको अपराधीकरण गर्दै चरम संकटको स्थिति सिर्जना गरिरहेछ। आइतवार, बैशाख १४, २०७७
कोरोना संक्रमण हुँदैमा मृत्यु हुँदैन अहिले संसारभर कोरोना भाइरसको संक्रमण छ । युरोप र अमेरिकामा धेरै जनाले ज्यान पनि गुमाएका छन । तर कोरोना संक्रमणको भन्दा यो संक्रमणको भ्रमले धेरै नागरिक चिन्तित छन् । सहि सुचना नै मानसिक तनाव न्यून गर्ने प्रमुख कारक हो । तसर्थ यी तथ्यलाई आत्मसात गर्यौं भने कोरोना संक्रमणबाट धेरै आत्तिनु जरुरी छैन । शुक्रवार, बैशाख १२, २०७७